Xen Project Hypervisor 4.12: Nhau Nyowani dzeVirtualization | Linux Vakapindwa muropa
XenProject iyo ndeimwe yeinonakidza kwazvo yakavhurwa sosi mapurojekiti epasirese ekuona. Xen ndeye hypervisor iyo inokutendera iwe kuti ushandise mhando dzakasiyana dzehunyanzvi paLinux (kuzere kuona, paravirtualization). Zvino iyo nyowani 4.12 version iyo ine inonakidza nhau kune vese vashandisi uye manejimendi ari kuvakira kwavo kuona paXen. Imwe yeaya matsva ndiko kuderedzwa kwekodhi kuti igare zvishoma uye kuwedzererwa.
Iyo imwe yakasarudzika yakakura yakatenderedza iyo Seguridad, iyo yakasimbiswa mune iyi vhezheni itsva. Kune mamwezve kodhi shanduko kune iyo x86 dhizaini, zvigadziriso zvinoita kuti zvinyanye kukodzera kune zvakadzamidzirwa kunyorera uye mota indasitiri. Dzimwe dzeshanduko dzinokanganisa chengetedzo dzinonyanya kukanganisa kusangana kwayo neQEMU, uye zvakare neArgo, iyo Virtual Machine Introspection (VMI) subsystem, nezvimwe.
Nezve shanduko maererano x86 kuvaka, iyo Xen 4.12 nyowani yakavandudza rutsigiro rweiyi ISA, mhedzisiro yekuedza kwemakore mashoma ebasa izvo zvabhadhara zvino. Iyo GRUB2 bootloader iri zvakare inokanganisika nekusimudzira, sezvo rutsigiro rwakawedzerwa kuitira kuti vashandisi vatange kubhucha kubva kune chero muenzi PVH kernel kuburikidza neGRUB menyu.
Ini ndakambotaura chimwe chinhu nezve embeds kana recessed uye zvemotokari. Mupfungwa iyi, kushanda nesimba kwakaitwa kuti zvive nyore uye zvive nyore kuti Xen ishandiswe mune yakasanganiswa yakaoma masisitimu. Uye kupedzisa, hatigone kupotsa mamwe mabasa ekuwedzera akawedzerwa mune iyi vhezheni nyowani, senge kuvandudzwa kweIOMMU mapping kodhi iyo inokanganisa mashandiro ehurongwa hwakavakirwa pa AMD EPYC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Xen Project Hypervisor 4.12: Nyowani Nhau dzeVirtualization